Painting Job Information [Genvers] အလုပ်ခွင်တွင်း ၀ င်ရန်အတွက်အလုပ်အကိုင်
"ပန်းချီ" အပါအဝင်တစ်နိုင်ငံလုံး site ပေါ်တွင်အလုပ်သတင်းအချက်အလက်စာရင်း
အခြေအနေ setting ⇒ [ပန်းချီ]
ပန်းချီအပါအ ၀ င်
Links ကုမ္ပဏီလီမိတက် - နေအိမ်ဆရာဝန် ၁၁၉-အလုပ်များကြည့်ပါ
Ichitomo Build Tech Co. , Ltd.
ပန်းချီရေးဆွဲသော ၀ န်ထမ်း◆ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်း◇အလုပ်◇ဆိုဒ်ဒါရိုက်တာ◇အလုပ်သင်ဖြစ်နိုင်သည်◆ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည် staff ၀ န်ထမ်းအသစ်များရှာဖွေခြင်း!သမ္မတအောက်မှာပွင့်လင်းပြီးတင်းကျပ်ပြီးဖော်ရွေတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ "အပြည့်အဝပွင့်လင်းသောအလုပ်နှင့်ကစားပါ" ဤတွင်သင်သည်သင်၏ "အပြည့်အဝပွင့်လင်းကျွမ်းကျင်မှု" နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်!
★☆★အတွေ့အကြုံရှိသောသူများအတွက်အထူး ဦး စားပေးကုသမှုနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုရန် (အလုပ်သင်)! ★☆★☆★လက်မှုပညာရှင်များသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်ချက်ချင်း★☆★☆★ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ပ ၀ န်ထမ်းနှင့်စာချုပ် ၀ န်ထမ်းများကိုလည်းရှာဖွေနေပါသည်★ inex ★သင်ကအတွေ့အကြုံနည်းသော်လည်းသင်ဤအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!နှစ်ပေါင်းများစွာအကြွေးနှင့်အောင်မြင်မှုများဖြင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကောင်းမွန်ပြီးသူသည်နေ့တိုင်းအလုပ်များနေသည်။အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သူများကိုကြိုးစားပါ။ (^^ personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ph အလေးပေးခြင်း♪ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးနှင့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါ။ သင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်လင့်ကစားအတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။
ပန်းချီရေးဆွဲသော ၀ န်ထမ်း job job အလုပ်မန်နေဂျာ②လက်မှုပညာ [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ③ဆိုက်ကြီးကြပ်သူ
◆ပန်းချီရေးဆွဲသူဝန်ထမ်းများ [အတွေ့အကြုံရှိ]၊ အတွေ့အကြုံမရှိသော [အလုပ်သင်] လက်သမားများ
အဓိကအားဖြင့်ကန်နာဂါစီရင်စုနှင့်တိုကျို / ကန်တိုဒေသ၏ဆင်ခြေဖုံးများ
Ichitomo Build Tech Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Ikeda Nuriken Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
အတွေ့အကြုံမရှိသူသို့မဟုတ်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြောင်းလဲသွားသူများအတွက်အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှုသည်အသက်အရွယ်မရွေးသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးပျူငှာသောဝန်းကျင်တွင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သည်။၎င်းသည်အဆောက်အအုံများနှင့်ကွန်ဒိုမီနီယံအဆောက်အအုံများအတွက်ပန်းချီကားတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အလုပ်ပမာဏများစွာပေါများပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောဝင်ငွေဖြစ်သည် !!အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအတွေ့အကြုံရှိသူများသည်ချက်ချင်းတက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်အတူတကွကြိုးစားလုပ်ဆောင်မည့်သင်၏ Yaruki သည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကုသမှုရှုထောင့်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။သင့်ဘဝကိုအလားအလာကောင်းသည့်အလုပ်တစ်ခုဖြင့် back up လုပ်ပါ။ငါတို့နှင့်အလုပ်လုပ်ချင်ပါသလား? ★☆★
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လစာ (လက်မှုပညာ) - ၁၃၀၀၀ မှယန်းမှ ၁၈၀၀၀ ယန်း။ * လစာသည် ...
Kashiwa / Funabashi စီရင်စုရှိနေရာများ၊ Chiba Matsudo မြို့နှင့်တိုကျို / Saitama / Ibaraki areaရိယာရှိ Kanto inရိယာရှိနေရာများ။
Bus ★အလုပ်များပြီးကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်★။များစွာသောစီမံကိန်းများ! ★☆《 လက်မှုပညာ / အတွေ့အကြုံရှိသူ your သင်၏အတွေ့အကြုံကိုချက်ချင်းပြသနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိသည်။သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ။ << အတွေ့အကြုံမရှိသောလူတစ်ယောက် >> ဤသည်မှာတစ်သက်တာအတွက် "သင်၏လက်၌အလုပ်" ရရှိရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။သငျသညျအတွေ့အကြုံမရှိရင်တောင် "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်" သူတွေကိုကျနော်တို့ကအစကတည်းက back up လိမ့်မယ်။ယခုမှစ။ "လက်၌အလုပ်များ" အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုပါ!ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အလုပ်လွယ်ကူခြင်း" ကြီးမားတဲ့အချက်ပါ!၎င်းသည်အကျိုးရှိစေသည့်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင် ၀ န်ထမ်းများသည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပူးပေါင်း၍ ယဉ်ကျေးပြီးအရည်အသွေးမြင့်သောအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။သင်နားမလည်သည့်အရာအားလုံးကိုသင်မေးနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အမှားအသစ်များပြုလုပ်ရန်နှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုယူရန်မကြောက်ပါနှင့်။
Mizuho မြို့၊ Nishitama ခရိုင်၊ တိုကျို
Arekuto Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Sano Paint Co. , Ltd.
[ပန်းချီ ၀ န်ထမ်းများ] ဆယ်ကျော်သက်မှအသက် ၄၀ အထိအမျိုးမျိုးသော ၀ န်ထမ်းများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။လစဉ်ဝင်ငွေ ၂၆၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်မကသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများနှင့် choikaji တို့သည်လည်းကြိုဆိုကြသည်။
■ကျွန်ုပ်တို့တွင်သင်ယူရန်စွမ်းရည်များစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုရရှိသည်။ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏“ ကျေနပ်မှု” နှင့်ဖောက်သည်များ၏ပြုံးခြင်းသည်ပျော်ရွှင်သောအလုပ်များဖြစ်သည်။သွက်လက်။ တောက်ပသောအလုပ်ခွင်၌ဘဝအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ချင်ပါသလား။
ဆေးသုတ်ခြင်း ၀ န်ထမ်းများ①အလုပ်သင်②အတွေ့အကြုံရှိသူ
Daily နေ့စဉ်လစာ rent အလုပ်သင် / ယန်း ၉၀၀၀ ② person အတွေ့အကြုံရှိသောသူ / ယန်း ၁၂၀၀၀ ※※အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ * (၁) ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်ကာလ ၃ လ ... နေ့စဉ်လစာ ...
Sano Paint Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်★အပတ်စဉ်ရုံးပိတ်ရက်များ XNUMX ရက်ဆွေးနွေးချက်★ဗိသုကာပန်းချီ ၀ န်ထမ်း << အတွေ့အကြုံမရှိ >> အတွေ့အကြုံရှိသူများမြင့်မားသောကုသမှု★အချိန်ပိုအလုပ်နီးပါးမရှိ!အတွေ့အကြုံအခြေပြုငှားရမ်းခြင်း★များပြားသောစီမံကိန်းများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်ဖြင့်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေ!အရည်အချင်း☆၎င်းသည်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု♪စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကောင်းမွန်ပြီး ၀ န်ထမ်းများအလုံအလောက်မရှိခြင်း!
★☆ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲ။ဘယ်လိုအလုပ်ခွင်မျိုးလဲငါစိုးရိမ်တယ်! For ★☆★သင့်အတွက်♪ဘာကြောင့်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့မ ၀ င်ပါစေ★★ everyone လူတိုင်းသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များပြည့်နှက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။အားလုံးသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏မျက်လုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ။ဒီမှာ 's လျှင်, ကအေးမြ!မင်းလုပ်လို့ရလား !!ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူးသင်၏အရေးကြီးသောဘဝကိုထောက်ပံ့သောအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နေခြင်းကြောင့်သတိထားပါ။၎င်းသည်တစ်သက်တာအတွက် "သင်၏လက်၌အလုပ်" ရရှိရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။သငျသညျအတွေ့အကြုံမရှိရင်တောင် "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်" သူတွေကိုကျနော်တို့ကအစကတည်းက back up လိမ့်မယ်။ယခုမှစ။ "လက်၌အလုပ်များ" အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုပါ!ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အလုပ်လွယ်ကူခြင်း" ကြီးမားတဲ့အချက်ပါ!၎င်းသည်အကျိုးရှိစေသည့်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသက်သေပြနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သာစိတ်ရင်းမှန်၊
[ကုမ္ပဏီ] ပန်းချီ ၀ န်ထမ်း << အတွေ့အကြုံမရှိပါ >> အတွေ့အကြုံရှိသော◆ salary နေ့စဉ်လစာ - ၁၈,၀၀၀ ယန်းအတွေ့အကြုံမရှိ - App [အလုပ်သင်] နေ့စဉ်လစာ - ယန်း ၁၀,၀၀၀ စတင် * စမ်းသပ်ကာလ ၃ လ (စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍) ရနိုင်သည်။
အဓိကအားဖြင့် Chiba စီရင်စု၊ တိုကျိုနှင့်အိမ်နီးချင်းဒေသများဖြစ်သည်
နေ့စဉ်လစာ ၁၅၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်မကသော!ကြိုတင်ချေးငှားခြင်းအပါအဝင်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ဒါကသင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။
Sanken Co. , Ltdအလုပ်များကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံမရှိသူများနှင့်လှုံ့ဆော်သူများကိုကြိုဆိုသည်။ [အရည်အချင်းထောက်ခံမှုစနစ်] ရှိသောကြောင့် "ငါဘာမှမသိဘူး!" ဟုပြောခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြင်ကြင်နာနာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာသင်ကြားပေးလိမ့်မည်။အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကအကြီးတန်း ၀ န်ထမ်းများအားအမြဲမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ * Kikusui SA နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ အထူးပန်းချီကားသည်အနာဂတ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပန်းချီကားတစ်ခုဖြစ်သည်။အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်လည်းလွတ်လပ်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်။
ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းမှပံ့ပိုး!ဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်, ငါခြယ်သသောအပြင်ဘက်နံရံ။ ငါကဆေးထိုးသည့်နေ့မှစ။ , ဒါပေမယ့်ငါမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းသို့သော်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ဆက်ဆံနိုင်ပြီးသူတို့နှင့်ရှည်လျားသောဆက်ဆံရေးရှိနိုင်သည်။ “ ဖောက်သည်ပထမ” ၏ဤစိတ်ကူးကိုစာနာတတ်သူများကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်စားနေကြသည်။
ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းမှပံ့ပိုး!ဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါခြယ်သထားသောအပြင်ဘက်နံရံ။ ပန်းချီဆွဲသည့် နေ့မှစတင်၍ ဆိုးရွားလာသည်။ သို့သော်ယင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သည်။ ဆောက်လုပ်မှုအရေအတွက်တိုးမြှင့်မည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး စီနှင့်ဆက်ဆံနိုင်ပြီးသူတို့နှင့်ရှည်လျားသောဆက်ဆံရေးရှိနိုင်သည်။ "ဖောက်သည်၏ပထမနိယာမ" ဒီစိတ်ကူးကိုစာနာတတ်တဲ့သူတွေကိုစောင့်နေတယ်။ ကုမ္ပဏီကို ၇ နှစ်တည်ထောင်ထားတယ်။ stable ငါ့မှာတည်ငြိမ်တယ်။ အလုပ်!
အပြင်ပန်းနံရံပန်းချီဆရာ၊ ခေါင်မိုးပန်းချီ၊ ရေစိုခံ
[နေ့စဉ်လုပ်အားခသို့မဟုတ်လစဉ်လုပ်အားခ၊ ရွေးချယ်မှု OK] ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုသုံးသပ်မည်။ <နေ့စဉ်လုပ်ခ>  နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~  နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၅၀၀၀ ယန်း ~ ၂၀၀၀၀ ယန်း★နှစ် ဦး စလုံးသည်သီးခြား "site allowance" ဖြစ်သည်။
◆ Site / အဓိကအားဖြင့် Yokohama City ပတ်ပတ်လည်တွင်တိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်လည်းနေရာများရှိသည်
Rise Home ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အကွာအဝေးအဝေးမှလျှောက်လွှာများကိုကြိုဆိုပါတယ်☆အဆောင်သို့ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ပါ။ အလုပ်များသောလုပ်ငန်း 20-60s တက်ကြွစွာ☆လူငယ်မှဝါရင့်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှု!
အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်လမ်းညွှန်မှုအတွက်တာ ၀ န်ယူလိမ့်မည်။သက်သောင့်သက်သာအလုပ်လုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူငယ်များစွာနှင့်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသောအလုပ်ခွင်။သင်၏စွမ်းရည်နှင့်အတွေ့အကြုံကိုအကဲဖြတ်ပြီးသင်၏လစာတွင်ချက်ချင်းထင်ဟပ်ပါ။သင်၏ "လှုံ့ဆော်မှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်မှု" ကအရာအားလုံးပါ။
ခေါင်မိုး / စာရွက်သတ္တုအလုပ်
အတွေ့အကြုံရှိသူ - နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၆၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မကအလုပ်သင် - ၁၁၀၀၀ (သို့) ထို့ထက်ပိုသော salary နေ့စဉ်လစာ☆သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု (အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း) ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝအကဲဖြတ်ပါမည်။
Tama ရပ်ကွက်, Kawasaki City, Kanagawa စီရင်စု
Rise Home ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
■အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ ကြားရှိသူများလှုပ်ရှားတက်ကြွသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။အိမ်တွင်းအလုပ်ပဲ!အလုပ်သင်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူများကိုစုဆောင်းသည်။သငျသညျအလုပ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဝနှစ် ဦး စလုံးပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်!
အတွေ့အကြုံရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်းမှ ၁၆၀၀၀ သို့ယန်းထက်မကအတွေ့အကြုံရှိသောလူတစ်ယောက် - နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်ကျော် (စမ်းသပ်ကာလကာလနေ့စဉ်လစာယန်း ၉၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မက)
Sakura မြို့တော်ဗဟိုပြုသည့်စီရင်စုနယ်ရှိနေရာတစ်ခုစီ၊ Chiba စီရင်စု * တိုက်ရိုက်ခုန်နိုင်သည်
အစပြုသူများကိုကြိုဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးများသည်တက်ကြွစွာရှိနေသည်။ ပထမတွင်လူတိုင်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသူများဖြစ်သည်။နွေးထွေးစွာနဲ့ယဉ်ကျေးစွာလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်။ [အတွေ့အကြုံမရှိသောအချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်း! ] အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရများ၊ အထက်တန်းကျောင်းသားများအရည်အချင်းမပြည့်မီ။ အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုသည်။သင်ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါကအဆင်ပြေပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်၊ သင်ရှုံးနိမ့်မည်မဟုတ်၊ မကြောက်မည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားနိုင်သည်။ ★အမျိုးသမီးများတက်ကြွသောအလုပ်ခွင်။မကြာသေးမီကလယ်ကွင်း၌အမျိုးသမီးအရေအတွက်တိုးများလာနေသည်။ ★သင်သည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသည့်တိုင်နေ့စဉ်လစာသည်ယန်း ၁၃၀၀၀ ဖြစ်သည်။လစဉ်ယန်း ၃၂၀,၀၀၀ မှ ၅၀၀,၀၀၀ အထိရရှိနိုင်ပါသည်။ တည်ငြိမ်။ လုံခြုံသောလစဉ်လစာစနစ်ရှိပါသည်♪★ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူထားသော ၀ န်ထမ်းအဆောင် (ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု) တစ်ကိုယ်ရေနှင့်မိသားစုများအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ★ Excellent ကတည်ငြိမ်မှု!site သည်အဓိကအားဖြင့်အထွေထွေကန်ထရိုက်တာဖြစ်သောကြောင့်အလုပ်များစွာရှိပါသည်။
Hisaya Paint Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်မှုပညာရှင်များဖြစ်ကြပြီးသင်စိတ်ချလက်ချအနားယူနိုင်သည်။အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများအတွက်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် site အတွက်လိုအပ်သောဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာသင်ပေးလိမ့်မည်။သက်တောင့်သက်သာရှိသောလုပ်ငန်းခွင်၌သင်၏စွမ်းရည်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်အောင်ပေးပါ။ဖောက်သည်များအနေဖြင့်“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟုပြောရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအလုပ်များစေသည်ဟုခံစားစေသည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ရက်နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ၂၀၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။
တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ ချီဘစီရင်စု၊ ဆိုင်းတာမာစီရင်စု၊ Kanagawa စီရင်စုများဖြစ်သော Katsushika ရပ်ကွက်၊ Kita ရပ်ကွက်၊ Arakawa ရပ်ကွက်၊ Adachi ရပ်ကွက်အပေါ်ဗဟို
Hisaya Paint Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
အလွန်ကောင်းသောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပေါများသောပမာဏ!ငါလစာအကဲဖြတ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလိမ့်မည်။ပထမတန်းစားလက်မှုပညာ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ရယူချင်ပါသလား။ * ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများရှာဖွေခြင်း
ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်သင်ယူကြပါစို့ကျေးဇူးပြု၍ ထိုခံစားချက်နှင့်အလုပ်လုပ်ပါလက်ရှိ ၀ န်ထမ်းအချို့သည်အတွေ့အကြုံမရှိသူများမှ စတင်၍ လက်ရှိတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နေကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တိုးတက်မှုကိုအခါအားလျော်စွာအကဲဖြတ်ပါမည်။
ရေစိုခံဝန်ထမ်းများအတွေ့အကြုံရှိသောနေ့စဉ်လစာ - ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ်ယောက်၏နေ့စဉ်လစာ - ၁၀,၀၀၀ ယန်း
Saitama စီရင်စုနှင့်တိုကျိုရှိ site တစ်ခုစီသည် Matsudo City ကို ဗဟိုပြု၍၊ Chiba စီရင်စု * site ပေါ် မူတည်၍ တိုက်ရိုက် bounce သည် OK ဖြစ်သည်။
Kohoku Pentech Co. , Ltd.
★ပန်းချီဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း★၎င်းသည်အမျိုးသမီးများတက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိပါ။မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို!ပညာရေးနောက်ခံမရှိပါ။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်အားထက်သန်။ အပြုသဘောဆောင်ပြီးအတူတကွကြီးထွားနိုင်သောလူများကိုရှာဖွေနေသည်။၎င်းသည်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသောလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သည်။
[အတွေ့အကြုံရှိသောလူများ] သင်၏စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းရည်များကိုအလွန်အမင်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သင်၏ကုသမှုတွင်သူတို့ကိုထင်ဟပ်ခြင်းဖြင့်သင်ငွေအမြောက်အများရရှိမည်ဖြစ်သည်။ [အတွေ့အကြုံမရှိသူများ] ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဓာတ်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအထူးအလေးထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုချက်ချင်းငှားရမ်းပါမည်။အလုပ်ရရန်လျင်မြန်စွာနှင့်သေချာစွာကြီးပြင်းပါ! မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကန်ထရိုက်များတစ်ပြိုင်နက်စုဆောင်းခြင်း!
★နေ့စဉ်လုပ်အားခအတွေ့အကြုံ - ယန်း ၁၃၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူ - ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ Start * အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ * အသက်ပေါ် မူတည်၍ နှင့်အပြီး ...
★ Yokohama City, Kanagawa Prefecture - တိုကျိုနှင့်ကန်တိုsuburရိယာ၏ဆင်ခြေဖုံးရှိ site တစ်ခုစီ * တိုက်ရိုက်ပြန်လာ OK
Kohoku Pentech Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
သုတ်လိမ်းပါ။ Co. , Ltd.
လစဉ်ယန်း ၃၀၀၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မကသောလစာသည်ဖြစ်နိုင်သည်။အကယ်၍ သင်သည်လှုံ့ဆော်ခံရပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံပြီးသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည် ★ပညာရေးနောက်ခံနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိပါ
ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သော ၀ န်ထမ်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။စာမေးပွဲကြေးနှင့်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများအားလုံးကိုကုမ္ပဏီမှပေးသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်ကျွန်ုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမည်။သင်သည်များစွာသောဝင်ငွေများနှင့်သင်၏အရည်အချင်းများတိုးတက်လာရန်ရည်ရွယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့လာပါ။ ☆တိုက်ရိုက်ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။သင်ရုံးသို့သွားရန်အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုများကိုချွေတာနိုင်သောကြောင့်ခရီးသွားခြင်းသည်လွယ်ကူပါသည်။အကယ်၍ သင်၏အိမ်သည်ဆိုက်နှင့်နီးလျှင်၊ သင်သည်စော။ အိမ်ပြန်နိုင်သည်။သင်၏ပုဂ္ဂလိကအချိန်ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသူ] နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၅၀၀၀ ယန်း ~ [အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော] နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ ◆သင်တန်းကာလ (၃ လအထိ) နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၁၀၀၀ ယန်းတိုးမြှင့် * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်အရဆုံးဖြတ်သည် ...
အဓိကအားဖြင့်တိုကျို၏ရပ်ကွက် (၂၃) ခု၊ Saitama စီရင်စုရှိနေရာတစ်ခုစီ
သုတ်လိမ်းပါ။ Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[ပန်းချီ] ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံရှိသောလူများကိုရှာဖွေနေသည်။သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အကဲဖြတ်ပါမည်။အတွေ့အကြုံမရှိကြတဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသေသေချာချာသင်ပေးမယ်။
# ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကိုရှာနေတာ။၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာနှင့်အလုပ်များသောကြောင့်အလုပ်ကိုစွန့်ခွာသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုသည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြီးပြည့်စုံသောအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသင်နှင့်သင့်တော်မည့်မြင့်မားသောကုသမှုဖြင့်သင့်ကိုကြိုဆိုလိမ့်မည်။အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်ပထမ ဦး စွာ၊ သင်သွားလိုရာကိုမည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည့်တကယ့်နည်းစနစ်ကိုအသေအချာသင်ပေးပါမည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သက်ရှိသတ္တဝါ၏စွမ်းရည်ကိုဆည်းပူးနိုင်ပြီးငွေရှာနိုင်လိမ့်မည်။ !၎င်းသည်အစပိုင်းတွင်အနည်းငယ်အလုပ်များသော်လည်းသင်၏ကြီးထွားမှုကိုခံစားရနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်၏လစာကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သင်အတွေ့အကြုံရခဲ့လျှင်သင်၏နေ့စဉ်လစာကိုယန်း ၁၈၀၀၀ တိုးနိုင်သည်။သင်၏လက်၌အလုပ်ရပြီးပျံသန်းရန်အခွင့်အလမ်း!အတူတူကြီးပွားကြပါစို့ !!
●နေ့စဉ်လစာ / ယန်း ၈၀၀၀ (အတွေ့အကြုံမရှိသူ) -8,000 ယန်း (အတွေ့အကြုံရှိသူ) * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်မည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းလစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
●တိုတို၊ တိုကျို၊ ကီတို၊ ဆူတာမာ၊ ကန်နာဂါစီရင်စုရှိတိုကျို - အရာအားလုံး * ကုမ္ပဏီစုရုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ site ကိုသွားပါမယ်။